အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ မန်ယူ အိုလံပစ်ကွင်းထဲမှာ အိမ်ရှင်ဆီက (၃)မှတ်အပြည့် ရယူနိုင်မလား? – MySport Myanmar
အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ မန်ယူ အိုလံပစ်ကွင်းထဲမှာ အိမ်ရှင်ဆီက (၃)မှတ်အပြည့် ရယူနိုင်မလား?
ဒီနေ့ည (၁၂)နာရီအချိန် အိုလံပစ်ဘောလုံးကွင်းကြီးအတွင်းမှာ ဝက်စ်ဟမ်းယူနိုက်တက်အသင််းနဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၁၁)အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး ဒီပွဲက ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ လက်ရှိမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းကလည်း ဒီရာသီရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အဝေးကွင်းပွဲစဉ်တွေအားလုံးကို အနိုင်ယူထားခဲ့တာဖြစ်လို့ ဝက်စ်ဟမ်းတို့ရဲ့ အိုလံပစ်ကွင်းထဲမှာ နောက်ထပ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကို ထပ်မံယူဆောင်နိုင်ဦးမလားဆိုတာ တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။
ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းက နောက်ဆုံးကစားထားခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံအိမ်ကွင်း(၅)ပွဲမှာ မန်စီးတီးအသင်းကို သရေရအောင် ကစားထားနိုင်ခဲ့ပြီး အက်စတွန်ဗီလာ ဖူလ်ဟမ် ဝုလ်ဗ်နဲ့ ဟားလ်စီးတီးအသင်းတွေကို အနိုင်ယူထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝက်စ်ဟမ်းဟာ ဒီရာသီမှာလည်း လီဗာပူးလ်အသင်းပြီးရင် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဒုတိယ အိမ်ကွင်းအကောင်းဆုံးအသင်း ဖြစ်လို့နေပြီး ရာသီအစမှာပဲ နယူးကာဆဲလ်ကိုသာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းပြဒေးဗစ်မွိုက်စ် ပြောကြားထားချက်အရ ဒီပွဲမှာ ဝက်စ်ဟမ်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားသမား အန်တိုနီယိုက ပေါင်ဒဏ်ရာကြောင့် ပါဝင်ကစားနိုင်မဟုတ်လို့ အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းက အနည်းနဲ့အများ ကျဆင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဧည့်သည်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ ဒီရာသီမှာ အဝေးကွင်းစွမ်းဆောင်ရည်က အထူးကောင်းမွန်လို့နေပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဝေးကွင်းပွဲတိုင်းကို အနိုင်ကစားထားခဲ့သလို ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း ပီအက်စ်ဂျီကို အဝေးကွင်းမှာ အနိုင်ယူထားခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်က ဒီရာသီမှာ ကစားခဲ့သမျှ ပြိုင်ပွဲစုံ အဝေးကွင်း(၈)ပွဲမှာ ဘာရှက်ဆီဟီနဲ့ ကစားခဲ့ရတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ပွဲတိုင်းကို အနိုင်ယူထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဝက်စ်ဟမ်းကွင်းမှာ လာရောက်ကစားရတဲ့ အဝေးကွင်းနောက်ဆုံးပွဲစဉ်(၅)ပွဲမှာ ၂၀၁ရခုနှစ်က ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာသာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး နှစ်ရာသီဆက်တိုက် အရှံးပေးထားခဲ့ရပါတယ်။
ယူနိုက်တက်က ဒီပွဲမတိုင်ခင် ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ ကစားထားခဲ့ရပြီး ဒီပွဲပြီးရင်လည်း လိုက်ဇ်ပစ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် နောက်တစ်ဆင့်တတ်ရေးအဖြစ် အကြိတ်အနယ်ကစားရမှာဖြစ်လို့ ဒီပွဲကို ကစားအားချွေတာလာနိုင်သလို ကစားသမားအပြောင်းအလဲတချို့လည်း ပြုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပခုံးဒဏ်ရာရနေတဲ့ ရပ်စ်ဖိုဒ့်နဲ့ ပွဲဆက်တွေ အရမ်းများနေတဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်တို့ကို အနားပေးလာနိုင်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေတုန်းကလိုမျိုး အရှုံးရလဒ်နဲ့ မရင်ဆိုင်ရဖို့အတွက်လောက်သာ ပစ်မှတ်ထားလာနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အိုလံပစ်ကွင်းနဲ့ အိမ်ရှင်ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းတို့ဟာ ယူနိုက်တက်အတွက် ခက်ခဲစေမှာ သေချာနေပြီး ဒီအခက်အခဲကို ယူနိုက်တက်ကျော်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
MySport Myanmar2020-12-05T17:45:12+06:30December 5th, 2020|All Posts, Football, Premier League|